परेवा – मझेरी डट कम
ए ! मनुवा, तैंले त टन्न घिचिस् होला, तर हामी भने भोकै छौं, हाम्रा बचेरा पनि भोकै छन् । यो सहरको ठाउँ, न बिस्कुन न कुनै अन्नको कुनिउँ, के खाएर बाँच्ने हामीहरू – तैंले यसो दुइचार सिता भात फ्याक्ने गरेको थिइस्, त्यो पनि आज बिर्सिस् -‘
ती जोडी परेवाबीचको झगडाले कोमल खिन्न भयो । उसले मनमनै सोच्यो – ” दुवै भोका थिए, जो थियो, मिलेर खाएको भए हुन्थ्यो । झगडा किन गर्नु पर्थ्यो – भाइ फुटे, गँवार लुटे भने झैं तिनीहरू झगडा गर्दागर्दै अरूले अन्न सिध्याउने भए ।” यत्तिकैमा भाले परेवा उड्यो र गुँडमा बस्यो । केही समयपछि पोथी पनि गुँडमा पुगी र बचेरालाई चाहारा खुवाउन थाली । त्यसपछि भाले पनि आहाराको खोजीमा उड्यो । भाले नआउन्जेलसम्म पोथीले गुँड छाडिन । त्यस दृश्यले कोमललाई यथार्थबोध गरायो । वास्तवमा ती जोडीबीच आफ्नो आहाराको लागि होइन, बचेराको संरक्षणका निम्ति द्वन्द्व चर्केको रहेछ । बचेरा सानै भएकाले तिनीहरूको सुरक्षाका निम्ति एउटाले गुँडमा तुरुन्त फर्कन दबाव दिइरहेको रहेछ । पोथी परेवाद्वारा आफ्ना लालाबाला प्रतिको आफ्नो कर्तव्य र दायित्व एकै साथ निर्वाह गरिएको रहेछ ।
कोमल अझै तरङ्गिन थाल्यो – “यो देशका पनि धेरै छोराछोरी छन् । हामीले तिनीहरूको उचित स्याहार र लालनपालन गर्न नसेकेकै कारणबाट तिनीहरू अहिले तितरबितर भएका छन् । कुनै जापानमा भूमिगत भएका छन् भने कुनै दक्षिण कोरियामा यन्त्रमानवले गर्ने कठोर र जोखिमपूर्ण काम गर्दै छन् । कोही बेलायतमा जुठा भाँडा पखाल्दै छन् भने कुनै अमेरिकामा मुर्दा गाढ्ने खाल्डाहरू खन्ने काममा व्यस्त देखिन्छन् । राम्रो लगाउने, मीठो खाने र धेरै पैसा कमाएर सुखी जीवन बिताउने प्रलोभनमा विदेशिएका केयौं चेलीहरूले अहिले त्यहाँ नारकीय जीवन ब्यतीत गर्नु परिरहेको छ । कुनै अङ्गभङ्ग भएर फर्कदै छन् त कुनै त्यहीँको जेलमै सडेका छन् । यदि हामीले तिनीहरूलाई पालनपोषण गर्न सकेको भए, उचित शिक्षा दिन सकेको भए, काम र मामको व्यवस्था गर्न सकेको भए के तिनीहरू मुग्लान पस्नुपथ्र्यो – अवश्य पर्दैनथ्यो । तर हाम्रो दुर्भाग्य, हामीले त्यसो गर्न सकेनौं । पृथ्वीको एउटा चेतनशील प्राणी भएर पनि हामीले त्यो परेवाजोडीको जत्तिकै कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेनौं । धिक्कार छ हामीलाई ! धिक्कार छ !” यत्तिकैमा कोमलको तरङ्ग टुट्यो । उसलाई अलि सङ्कोच पनि लाग्यो । आँखाबाट गाला र चिउँडो हुँदै बगेका आँसु पुछ्दै कोमल कौसीबाट आफ्नै कोठातर्फ लाग्यो ।
सदाझैं आज पनि खाना खाने बेला भयो, कोमलले एक मुठी अन्न कौसीमा छर्žयो, तर त्यहाँ ती परेवाका जोडी मध्ये कुनै पनि आएनन् । आश्चर्य मान्दै उसले परेवाको गुँडतर्फ हेर्žयो, त्यहाँ कुनै गुँड थिएन । भेन्टिलेसनको खापा लगाइएको देखियो । त्यसै झ्याल मुनि गुँड भत्किएको र दुइ बचेरा पछारिएर रक्त वमन गरी मरेका देखिए । सायद बाजको झम्टाइमा परेर होला, पोथी परेवा रक्ताम्य अवस्थामा पाइयो । आकाशमा भाले परेवा वेगले फन्का मारिरहेको देखियो । परेवी र बचेराको वियोगले रन्थनिँदै फन्का मारिरहेको भाले परेवालाई हेर्दा हेर्दै बाजले गाँजेर बेपत्ता बनायो । यस्तो कठोर दृश्यले कोमललाई अत्यन्त पीडाबोध भयो । उसलाई द्वन्द्वकालमा मारिएका हजारौं युवायुवती र अपहरण गरी बेपत्ता बनाइएका सयौं सयौं निरीह जनताको झल्झली सम्झना भयो । उता कोमलले परेवाप्रति निकै चासो देखाएको देखेर गर्जमान गज्र्यो र्- बचेराको च्याँ च्याँ र परेवाको घुराइले रातभर निद्रा परेन र बिहानै उठेर भेन्टिलेसन लगाइ दिएँ । अब बल्ल नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भने झैं हुने भयो ।’
आँखा अगाडिको बीभत्स दृश्यले कोमल अत्यन्त भावविव्हल बन्यो र उसका मनमा आक्रोशका अनेक तरङ्ग चढ्न थाले – “गर्जमान ! तैंले निर्दोष परेवाप्रति जे गरिस् त्यो बिलकुल बेठीक गरिस् । तँ प्रति अगाध विश्वास गरेर तेरो महलमा आश्रय लिने प्रति तैंले अक्षम्य घात गरिस् । परेवालाई लखेट्नु नै थियो भने पनि बचेरा हुर्केपछि लखेटेको भए तँलाई के हानी हुन्थ्यो – निद्रा नपरेको निहुँमा क्षणिक आवेशमा आएर निरपराध परेवाप्रति तैँले जघन्य अपराध गरिस्, गर्जमान” ।
गर्जमानको गर्जन र सन्काहापनको सामना गर्ने क्षमता त कोमल एक्लैमा थिएन तर शान्तिको प्रतीक मानिएको परेवाप्रति बिना कसुर गर्जमानले गरेको कठोर र निर्दयी व्यवहार भने उसलाई पटक्कै सहृय भएन । यसैले कोमल एउटा निक्र्यौलमा पुग्यो – यहाँ हैकम चलाइरहेका गर्जमान जस्ता हजारौं हजार पीडक र सन्काहाहरू, शोषक र सामन्तहरूको जरो नउखल्ने हो भने थिचोमिचोमा परेका लाखौं करोडौं शोषित र पीडितहरूले युगौंयुगसम्म पनि निर्दोष परेवाको नियति भोगि नै रहनु पर्नेछ ।’